Beesha Caalamka oo farriin u dirtay Golaha Wadatashiga | KEYDMEDIA ONLINE
Beesha Caalamka oo farriin u dirtay Golaha Wadatashiga
Saaxiibada Soomaaliya (Beesha lixaad) ayaa shuruud ku xiray taageeradooda ku aaddan hannaanka doorashooyinka dalka, waxayna fariin adag u direen Golaha Wadatashiga Qaranka.
MUQDISHO, Soomaaliya – War saxaafadeed ka soo baxay Wakiillada Beesha Caalamka ee Soomaaliya, ayaa lagu soo dhaweeyay shirka Madasha Wadatashiga Qaran (MWQ) ee 21 iyo 22 Agoosto, ka dhacay Muqdisho, waxayna bogaadiyeen wadatashigooda joogtada ah si horey loogu wado hanaanka doorashada, hayeeshee, waxa ay shuruud ku xireen bixinta dhaqaalaha doorashada ee ay hore u ballan qaadeen.
Waxa ay garab istaageen, walaaca ka dhashay natiijada doorashooyinkii kuraasta Aqalka sare ee Baarlamaanka 11-aad ee JFS, oo Madaxda Maamullaadu, si ku tagri-fal awoodeed ah u maamuleen, isla-markaana u xireen shaqsiyaad ay ahel iyo asxaab yihiin.
Wakiillada Beesha Caalamku, waxa ay Golaha Wada-tashiga Qaran ugu baaqeen in ay wax ka qabtaaan, walaaca taagan, si loo helo taageerada dhaqaale, farsamo iyo korjoogteyn ee la sugayo (Beesha Lixad).
“Waxaan sidoo kale garowsanahay walaaca laga keenay hanaanka doorashada Aqalka sare, waxaana GWQ ku boorinaynaa inay arrimahan wax ka qabtaan si loo taageero hanaan doorasho oo daahfuran, waqtiyaysan, loo wada dhanyahay oo lagu kalsoonaan karo oo loo qabto Golaha Shacabka”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay UNSOM.
Waxa ay adkeeyeen, in la dhowro qoondada haweenka oo ah 30%, taas oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyay boqolkiiba 24 kuraasta Aqalka Sare, “Waxaan ku baaqaynaa in dadaallada la laballaabo si loo gaaro qoondada haweenka ee ugu yaraan boqolkiiba 30 ee kuraasta labada Aqal ee Baarlamaanka ay haweenku helaan”.Ayaa lagu sii daray.
Qodob ka mid ah caqabadaha ku hor gudban hirgalinta doorashooyin, waa dhaqaalo la’aan baahsan, maadaama Ra;iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, oo hadda masuul ka ah amniga iyo doorashooyinka dalka uu yimid xilli kooxda Farmaajo xaalufiyeen xoolihii dadweynaha, gaar ahaan, lacagihii Dowladda.